Dadka Caruurtoodi Ku Xirantahay Dalka Liibiya oo Soo DHaweeyey Hadalka Ka Soo Yeeray Dawladda Federaalka • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Dadka Caruurtoodi Ku Xirantahay Dalka Liibiya oo Soo DHaweeyey Hadalka Ka Soo Yeeray Dawladda Federaalka
Dadka Caruurtoodi Ku Xirantahay Dalka Liibiya oo Soo DHaweeyey Hadalka Ka Soo Yeeray Dawladda Federaalka
Waalidiinta Carrurtooda kaga xiranyihin xabsiyada ku yaalla dalka Liibya ayaa waxaa ay ka hadleen hadalka kasoo yeeray Dowlada Federaalka ee Soomaaliya oo ahaa in ay soo sii deynayso Maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada dalkaasi.
Qaar ka mid ah Waalidiinta ku dhaqan magaalada Muqdisho oo Carruur ay dhaleen tageen dalka Liibya si ay uga tahriibaan oo ay galaan Wadamada Yurub ayaa waxaa ay sheegeen in ay soo dhowaynayaan arintaas hadii ay Dowlada Federaalka talaabada qaadayso oo ka dhabaynayso.
Hooyo Xaawo Cali,waxaa ay warbaahinta u sheegtay in labo wiil ay dhashay oo ka yar da’ada 23-sano ay mudo lix bilood ku dhow ku xiranyihin xabsi u dhow magaalada Tripoli ee caasimada dalka Libya.
Waxaana ay sheegtay in ilaa iyo saddex jeer ay bixisay lacago laaluush ah taasi oo lagu balanqaaday in xorriyadooda dib loogu soo celin doono carrurta ay dhashay balse aysan dhicin.
Sidoo kale waxaa ay ugu baaqday Dowlada Federaalka in ay arintaas ku talaabsato ayna doonayso in carrurta ay dhashay ay dib u helaan xorriyadooda kuna soo laabtan dalka.
Shalay ayay ahayd markii Wasiirka Qorsheynta iyo Xirrirka Caalamiga DFKM ah C/raxmaan C/shakuur Warsame shaaciyey in Dowlada ay dadaal u galayso sidii ay usoo sii deyn lahayd Maxaabiista Soomaaliyeed ku xiran dalka Liibya.